Thomas Ruth Airbus 330 MRTT Guddi Fulin oo aan shaqayn
Thomas Ruth Airbus 330 MRTT Guddi Fulin oo aan shaqayn sano 2 2 bilood ka hor #1080
Waxaan soo dejiyey nuqulkii ugu danbeeyay ee Thomas Ruths Airbus 330 MRTT maadaama aan qabo gabadh FO ah oo ku jirta RAAF oo u duuleysa.
Anigu ma heli karo guddiga sare ee shaqada. Waxay u egtahay mid fiican oo xitaa aan ka ciyaaro aniga oo aan weli awoodin inaan shaqeeyo. Haddii aan arko guddiga sare waxaan helayaa nambarka 321 ee caadiga ah waana shaqeynayaa, laakiin haddii aan isticmaalo furaha A si aan u guuro qadimka markaa waxaan helayaa gudiga saxda ah ee bedelaya barkadaha shidaalka ah laakiin waxna kama shaqeeyo gudigan. Ma hubo sababta aad u aragtay iyo haddii uu jiro qof fikrad ah
sidoo kale ma jiraan wax gaaban oo muhiim ah kaas oo kordhin doona kor u qaadista shidaalka
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.397